किन सतहमा आउँदैन पुरुषमाथिको हिंसा ? – Nepal Reports
Home Blog किन सतहमा आउँदैन पुरुषमाथिको हिंसा ?
June 12, 2017 Aashma Neupane 1
किन सतहमा आउँदैन पुरुषमाथिको हिंसा ?
June 12, 2017 Aashma Neupane
महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा भएका समाचारहरु प्रशस्तै आउँछन् । तर, पुरुषमाथि हुने गरेका हिंसा भने खासै सुन्न पाइँदैन ।
महिलामाथि हुने हिंसा जस्तै पुरुषहरुमाथि पनि जघन्य हिंसा हुने गर्दछ ।
अझ, पछिल्लो समयमा त नेपालमा महिला सशक्तिकरणका नाममा विना अध्यन पारित विभेदपूर्ण कानुनी प्रावधानका बलमा पुरुषमाथि कानुनी रुपमै अन्याय एवं ज्यादती हुने गरेका घटनाहरु बढ्दो संख्यामा बाहिरिने गरेका छन्।
सांकेतिक तस्विर: सौजन्य – मिरियम सिद्रक
पुरुषविरुद्ध शारीरिक र मानसिक गरी दुई खाले हिंसा समाजमा देखिने गरेका छन् । पुरुषहरुमाथि शारीरिकभन्दा मानसिक हिंसा बढी हुने गरेको पाइएको छ । पुरुष माथि हुने भौतिक रुपको शारीरिक हिंसालाई पहिचान गर्न सजिलो हुने भएता पनि मानसिक हिंसाको पहिचान गर्न सजिलो छैन । सरल र सहज रुपमा भन्नु पर्दा पुरुषलाई मानसिक वा मनोवैज्ञानिक रुपमा आघात पुराउने हिंसालाई मानसिक हिंसा भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
पुरुषले मनग्य कमाउन नसक्दा होस् वा छिमेकीका तुलनामा सोहि सरह बन्न वा हुन नसक्दा घर परिवार, छिमेकी वा साथीभाइबाट भोग्नुपर्ने मानसिक हिंसाको कुनै मापन गर्न सकिने बिषय होइन ।
यस बाहेक पनि पुरुषले शब्दका झटारो मार्फत दिनानुदिन व्यहोर्नुपर्ने “नामर्द”, “नपुंसक”, “जोइटिङ्ग्रे”, “हुत्तिहारा” जस्ता शब्दको प्रयोग पनि पुरुषविरुद्धको हिंसा हो । यो मानसिक यातना नै हो जसलाई मानसिक हिंसाका रुपमा लिन सकिन्छ । यस प्रकारका हिंसा महिलाबाट मात्रै होइन पुरुषले पुरुषलाई पनि गरिएका हुन सक्छन् ।
तर, यस्ता हिंसा सतहमा खासै आउँदैनन् । पुरुषलाई गाली गर्दा प्रयोग गरिने शब्द जस्तै महिलालाई प्रयोग गरियो भने बबण्डर नै हुन्छ । तर, महिलाको तुलनामा पुरुषमाथि हुने हिंसा सतहमा नआउनुमा निम्न कारणहरुलाई लिन सकिन्छ:
१. कानुनी जटिलता
नेपालमा महिला र पुरुष समान बनाउने नाममा बनेका र राज्यले निर्माण गरेका ऐन कानुनलाई हेर्ने हो भने महिलाको निम्ति सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया जति सरल र सहज छ पुरुषको निम्ति त्यति नै झञ्झटिलो र दिक्दार लाग्दो छ । राज्यले महिलालाई दिएको कानुनी अधिकारहरु केलाउने हो भने पुरुषलाई दिइएको कानुनी अधिकारहरु भन्दा बलिया देखिन्छन् । नेपाली ऐन कानुनमा पुरुषमाथि पनि हिंसा हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको पाइँदैन । त्यसैले होला कानुन निर्माण हुँदा पनि महिला मैत्री कानुनहरु बनेका पाइन्छन् । पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको अवस्थामा गाबिस वा नगरपालिका कार्यालयबाट प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता छ । महिलाको हकमा भने त्यो लागु हुँदैन ।
महिलालाई कानुनी रुपमा सहयोग गर्ने धेरै संघ-संगठनहरु छन् । राज्यले नै त्यसको व्यवस्थापन गरेको छ । जस्तै हरेक प्रहरी कार्यालयमा महिला सेलको व्यवस्था छ तर पुरुष बिरुद्धको हिंसा हेर्न कुनै छुट्टै व्यवस्था छैन । त्यस्तै महिला आयोग जुन सविधानले नै व्यवस्था गरिरहेको छ तर पुरुषका लागि छुट्टै पुरुषको हकहितमा बोलिदिने संघ-संस्था भने न्युन छन् । महिलाले दायर गरेका मुद्दाहरुले बढी प्राथमिकता पाउने र छिटो फैसला हुने गरेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ ।
२. पुरुष प्रधान समाजमा अहम र लोकलाज
पुरुष प्रधान समाजको आदत भएका नेपाली पुरुषहरु सामाजिक रुपमा आफूलाई बलियो र मुख्य ठान्छन् । त्यसैले महिला हुन् वा परिवार आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा पुरुषहरु गुज्रीररहेको पाइन्छ । महिलाहरु हुन् वा परिवारका सदस्यहरु पुरुषको नियन्त्रणमा छन् भन्ने आम मानसिकताका कारण पत्नीबाट होस् वा परिवारका अन्य सदस्यबाट आफु पीडित भएको, आफूमाथि हिंसा भएको, आफू मानसिक या शारिरीक हिंसाबाट पीडित भएको कुरा खुलेर भन्न नेपाली पुरुष तयार देखिदैन । यसो हुनुमा पुरुष प्रधान समाजको खोक्रो रवाफ, समाज अनि लोकलाजको त्रास मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । समाजले पत्नीबाट नियन्त्रित पुरुषलाई जोइटिंग्रे भन्ने महिलामा निर्भर हुने पुरुषलाई “हुत्तिहारा”, “नामर्द” जस्ता शव्दले प्रहार गर्ने परिपाटीका कारण पनि यस्ता घटनाहरु सतहमा आउन पाउँदैनन् ।
३. जानकारीको अभाव
कस्तो प्रकारको हिंसालाई पुरुषविरुद्धको हिंसा भन्नेबारे जनचेतनाको अभावका कारणले मात्र होइन यथेष्ट कानुनी प्रावधानको अभावले पनि पुरुषले आफू उपर हुने मानसिक या शारिरीक हिंसा भैरहेको जाहेर गर्न लाज/डर मान्ने अवस्थाका कारण पनि प्राय पुरुषविरुद्धका हिंसा सतहमा आउँदैनन् । शारीरिक हिंसाबारे केहि हदसम्मको चेतना भएतापनि धेरै पुरुषहरुमा मानसिक हिंसाबारेमा जानकारी रहेको पाइँदैन ।
हामीहरु विभेदरहित, समतामुलक समाजको निर्माणतर्फ अघि बढिरहँदा पुरुषमाथि हुने हिंशाका विषयमा पनि विशेष ध्यानाकर्षणको आवस्यकता देखिन्छ। आशा गरौँ भविष्यमा हाल विद्यमान महिला मुक्ति आन्दोलन जस्तै सम्भावित पुरुष मुक्ति आन्दोलनले हाम्रो सभ्यतालाई थप पछाडी नधकेलोस।
previous तिमीले पुज्ने नारी उही हो , तिमीलाई जिबन भर बुझ्ने नारी उही हो
अब अष्ट्रेलिया आउन झुट्टा कागजात पेश गरे १० वर्ष प्रतिबन्ध
विकासे कार्यालय स्थानीय तह मातहत आउने
Mahila kamjor hoina holan tara kanun le nai mahila lai kamjor dekhai rakhe ko cha…bas yeti bhannu cha malai